PressReader - Ilanga langeSonto: 2018-11-04 - ESKHALENI:
Ilanga langeSonto - 2018-11-04 - Ezemidlalo -
KWESINYE isikhathi izinqumo zepremier Soccer League (PSL) zikushiya ubambe ongezansi ngenxa yokuthi kawalindelekile amachashazi amabi kule nhlangano ngendlela ehlonishwa ngayo emhlabeni.
Namanje ngisazibuza ukuthi kungani Amazulu FC ephoqwe ukugijima umdlalo wasekhaya wequarter final yetelkom Knockout ne-orlando Pirates emoses Mabhida Stadium izolo kusihlwa. Wonke amakilabhu atonyulwe ukudlala ekhaya, imidlalo ayidlalela ezinkundleni ezisemthethweni zasekhaya.
Amazulu abefuna ukuthi lo mdlalo udlalelwe eking Zwelithini Stadium, emlazi, noma-ke okungenani eprincess Magogo Stadium, Kwamashu, okuyizinkundla zale kilabhu zasekhaya.
Kuyaxaka ukuthi le kilabhu ifunzwe incwadi ephuma kwipsl nabakwatelkom iyitshela ukuthi lo mdlalo kumele ungayiswa emlazi ngoba kaziqinile ezokuphepha, futhi kunabantu ababuka ibhola bemi kujantshi wesitimela.
Okuxaka kakhulu wukuthi IPSL isivumele Amazulu ukudlala nepirates amahlandla amabili emlazi ngaphandle kwezihibe.
Kusekusha njalo emiqondweni yabantu ukuthi eminyakeni embalwa edlule IPSL ikhombe imaritzburg United ukudlala umdlalo womkhumulajezi echatsworth Stadium, ethekwini, kubekwa izizathu zokuphepha ezingaqinile emgungundlovu.
Akuphelanga sikhathi esingakanani ipirates yayodlala umdlalo weligi neteam of Choice eharry Gwala Stadium, emgungundlovu.
Emdlalweni weligi akubange kusakhalwa ngezizathu zokuphepha emgungundlovu.
Ngonyaka odlule IPSL ivumele i-acornbush United ukuba iwudlalele Kabokweni Stadium, empumalanga, umdlalo wenedbank Cup ibhekene nekaizer Chiefs.
Lo mdlalo IPSL ibingawuhambisi ngani embombela Stadium uma ihlala ikhathalela ukuphepha?
Owamanqamu wetelkom Knockout wanyakenye IPSL iwuhambise Kwamashu nje.
Lokhu-ke kushiya umbuzo wokuthi kanti ipirates yenzelwa ufefe yini nxa izodlala imidlalo yemikhumulajezi Kwazulu-natal.
Kungani amakilabhu akwazuluNatal etshelwa ngezinkinga ezinkundleni zasekhaya nxa eqhathwe nawasegauteng kuphela?
Kanti le ligi ngeyaseningizimu Afrika noma ingeyasegauteng kuphela?
Okubuhlungu wukuthi amakilabhu ayaphoqeleka ukufela ngaphakathi ngoba nxa uke wavula umlomo kule ligi, uphiliswa kanzima njengoba kwesinye isikhathi ubekwa amacala okuthunaza isithunzi seligi.
Ukubanjwa kosuthu ngobhongwane ngalolu hlobo, kwenza kube lula ukukholwa wukuthi seluvithizelwa izinkulumo zakamuva ezenziwe ngulunga Sokhela ongesinye sezikhulu zale kilabhu lapho egxeke khona ezinye izinqumo ezibhekane nosuthu.
Okunye okudidayo ngezinqumo ZEPSL, wukuthi ivumile ukuba ichiefs ilethe umdlalo wasekhaya we- quarter final nesupersport United ethekwini.
I-PSL yiyona ethe ichiefs kumele idlale imidlalo emibili elandelanayo Kwazulu-natal ibukwa yizihlalo.
Icala ichiefs ehlawuliselwe lona lenzeke emdlalweni womkhumulajezi, kodwa nakhu namuhla ivunyelwe ukudlala umdlalo womkhumulajezi kusona lesi sifundazwe.
Angicabangi ukuthi ukuba bekungenye ikilabhu bekuzovunyelwa lokhu ukuba kwenzeke. Akumele abantu baze bafikelwe wumcabango wokuthi le ligi ngeyeqeqebana labathile basegauteng abafuna ukuzenzela umathanda.
Okubuhlungu-ke wukuthi kunezikhulu zakwazulu-natal ezingancamela ukuthengisa ngozakwabo kubantu basegauteng ukuze zona zihlale zinuka amakha amnandi futhi zinxeshezelwa ngezikhundla neminye imihlomulo eyenza zicwile emafutheni.
Nokho-ke siwubekile umlando ngoba akekho okwazi ukuwuguqula.